Isitudiyo esithandekayo; encanyathiselwe kwi-finca, kufutshane nolwandle - I-Airbnb
Isitudiyo esithandekayo; encanyathiselwe kwi-finca, kufutshane nolwandle
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguDamaris
Sihlala kwingingqi yaseCosta Cálida edume ngeelwandle zayo ezintle kunye nemozulu entle unyaka wonke. Nangona sihlala emaphandleni, i-finca yimizuzu emi-4 kuphela ukusuka kunxweme olukufutshane.
Zimbini izikhululo zeenqwelomoya; enye eAlicante, (136 km) naseCorvera (eMurcia 37 km). Zombini izikhululo zeenqwelo moya zibonelela ngeemoto ezirentwayo.
Indlu enkulu (finca) ingaphezulu kweminyaka engama-400 ubudala kwaye istudiyo sincanyathiselwe kwikhaya. Isitudiyo sinomdlalo waso. I-finca ikwi-campo (ezweni), kunye nembono ezantsi kwe-rambla ukuya kwi-Port nolwandle.
I-HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Apple TV, I-Disney+, I-Netflix, intambo yepremiyamu, I-HBO Max
Sihlala kwi-campo (ekwingingqi) ngaphandle kwelali encinci yendawo. Intle kwaye inoxolo kodwa iilwandle, ezininzi ezineflegi eziluhlaza, kunye nazo zonke izinto eziluncedo nje imizuzu emi-5 kude. UMurcia kunye neCartagena kukuhamba ngemizuzu engama-40 kuphela.
Umbuki zindwendwe ngu- Damaris
Iindwendwe zinokusitsalela nanini na, ngokukhethekayo ngefowuni (WhatsApp) okanye nge-imeyile.
Ngelixa silapha kwipropathi, siya kuhlala sizama ukunceda iindwendwe zethu apho sinakho. Nceda usazise ngazo naziphi na iimfuno ezikhethekileyo eziya kukunceda ukonwabele ukuhlala kwakho.
Ngelixa silapha kwipropathi, siya kuhlala sizama ukunceda iindwendwe zethu…